Qubanaha » Deg-Deg-Aftidii Shacabka Turkiga oo uu ku guuleystay Madaxweyne Erdogan
Deg-Deg-Aftidii Shacabka Turkiga oo uu ku guuleystay Madaxweyne Erdogan
Qubanaha.net-Ankara-Ra’iisal wasaaraha dalka Turkiga Binali Yildrim ayaa ku dhowaaqay in aftidii laga qaaday shacabka Turkiga ay guul ku dhamaatay waxana awooda loo gacan geliyay Madaxweyne Erdogan.
Binali Yildrim ayaa yiri: ‘Habka Madaxtooyada ayaa ku guuleystay doorashada iyadoo aan weli si rasmi ah loo shaacin”.
Isagoo la hadlayay dad gaaraya saddex kun oo ruux kuna sugnaa xarunta xisbiga cadaalada iyo horumarka ee magaalada Ankara ayuu ku tilmaamay doorashada ra’iisal wasaare Yildrim”Waa go’aan ay dadku gaareen,taariiqdeena dimuqraadiyadana bog cusub ayaa u furmay.”
Wakaalada wararka ee ay dowlada Turkigu maamusho ee Anadolu ayaa waxa ay sheegtay in 51.3 boqolkiiba ay u codeeyeen HAA halka 48.7 boqolkiiba ay u codeeyeen MAYA codadka la tiriyay oo gaaraya 99 boqolkiiba.
Madaxweyne Erdogan ayaa soo dhoweeyay natiijada isagoo ku tilmaamay “Go’aan Taariiqi ah.”Aftidan ayaa haddii ay dhabowdo waxa ay siineysaa Madaxweyne Erdogan in uu xafiiska sii joogayo illaa laga gaarayo sanadka 2029.